Docker vs Kubernetes: zvakanakira nekuipira zvese zviri zviviri | Kubva kuLinux
Docker vs Kubernetes: zvakanakira nekuipira
Isaac | | Networks / Maseva, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
La kuona kwave kuita kwakajairika, kunyanya mumasevhisi emakore kuti vakwanise kuwana zvakawanda kubva kumaseva ari munzvimbo dze data. Asi nguva pfupi yadarika, yemidziyo-yakavakirwa kuona ndiyo iri kuiswa, nekuti inobvumidza manejimendi anoshanda zvakanyanya (nekusafanirwa kuteedzera mamwe maitiro). Uye iri panhongonya apa pakamuka Docker vs.Kubernetes hondo.
Mapurojekiti maviri anozivikanwa, aungatoziva kare. Zvese ne zvayakanakira nezvayakaipira, uye nemisiyano izvo zvinogona kuve kiyi kana zvasvika pakubatsira iwe kusarudza chirongwa maererano nezvinodiwa zvako ...
1 Chii chinonzi container-based virtualization?
2 Chii chinonzi Docker?
3 Chii chinonzi Kubernetes?
4.1 Docker vs Kubernetes misiyano
4.4 Docker vs Kubernetes: Mhedziso
Chii chinonzi container-based virtualization?
Sezvaunoziva, kune akati wandei mhando dzehunyanzviseyakazara kuona, paravirtualization, nezvimwe. Zvakanaka, muchikamu chino ini ndichatarisa pakuona kwakazara kunowanzo shandiswa kana uchisimudza michina chaiyo, nemidziyo, kuti usaunze zvimwe zvinokanganisa zvinogona kukukanganisa.
Virtual michina- Iyo inosvika-centric virtualization nzira. Iyo yakavakirwa pa hypervisor, senge KVM, Xen, kana zvirongwa senge VMWare, VirtualBox, nezvimwe. Nesoftware iyi, muchina wakazara wepanyama (vCPU, vRAM, dhisiki dhisiki, chaiwo manetwork, zvigadzirwa, nezvimwewo) zvinoteedzerwa. Nekudaro, iyo inoshanda sisitimu (muenzi) inogona kuiswa pane ino chaiyo Hardware uye kubva ipapo, maapplication anogona kuiswa uye kumhanya nenzira imwecheteyo sezvaizoitwa pane iyo inomiririra inoshanda sisitimu.
Midziyo: ndeimwe tekinoroji mune iyo mhando yekasi kana sandbox inosanganisirwa mune izvo zvimwe zvikamu zveiyo yakazara system inogona kupihwa, iyo inoshanda zvakanyanya uye iine zvimwe zvakanakira kutakurika uye nekuwedzera kuchengetedzeka (kunyange hazvo isina kusununguka kwekukuvara) . Muchokwadi, pachinzvimbo chekuva ne hypervisor, mune izvi zviitiko kune software senge Docker naKubernetes iyo inoshandisa iyo inomiririra system pachayo kumhanya yakasarudzika maapplication. Chinhu chinokanganisa ndechekuti zvinongokutendera iwe kuendesa mapurogiramu ekuzvarwa kubva kune inomiririra OS yacho. Ndokunge, uri muVM iwe unogona kuverengera Windows pane Linux distro, semuenzaniso, uye pane iyo Windows unogona kumhanyisa chero chizvarwa app yacho, mumudziyo unogona chete kuzviita nemaapps anotsigirwa neiyo inomiririra system, mune iyi nyaya neLinux ...
Rangarira izvo zvinowedzerwa kana kutsigirwa hardware kunyatsoona, seIntel VT uye AMD-V yakwanisa kuvandudza mashandiro acho zvakanyanya, ichifungidzira chete 2% pamusoro peiyo CPU. Asi izvo hazvishande kune zvimwe zviwanikwa senge ndangariro kana iyo yekuchengetera pachayo iyo yakapihwa kuzere kunyatsoona, izvo zvinoreva chinodikanwa sosi yekushandisa.
Zvese izvi ndizvo zvinouya nemidziyo kugadzirisa, izvo haufanire kuteedzera mamwe maitiro kukwanisa kuendesa application. Semuenzaniso, kana iwe uchida kugadzira mudziyo une iyo Apache server, ine yakazara chaiyo muchina iwe unenge uine iyo inomiririra inoshanda sisitimu, iyo hypervisor, yevaenzi inoshanda system, uye software yeiyo sevhisi. Kune rimwe divi, nemudziyo waizongofanira kunge uine software inoshandisa zvakataurwa sevhisi, nekuti yaizenge ichimhanya mu "bhokisi" uri wega uye uchishandisa iyo inomiririra inoshanda sisitimu pachayo. Kunze kwaizvozvo, kuvhurwa kweapp kunonyanya kukurumidza, nekubvisa muenzi OS.
Chii chinonzi Docker?
Docker chirongwa chakavhurika sosi, pasi peiyo Apache rezinesi, yakanyorwa mumutauro weGo programming uye yaishandiswa kuendesa kuendesa kwezvikumbiro mukati memidziyo. Ndokunge, iyi software ichakubvumidza iwe kubata midziyo pane akasiyana masisitimu anoshanda, nekuti inoshanda pamapuratifomu akati wandei.
Pakasvika Docker, yakanga iine mikana yakawanda, uye yakapararira nekukurumidza. Chiono chayo chakazvimiririra cheiyo inoshanda sisitimu uye yakapfava, inobvumidzwa kuvaka midziyo ine maapplication, kuishandisa, kuayera, nekuaita nekukurumidza. Nzira yekuvhura ese maapplication aunoda nekushomeka kwekushandisa zviwanikwa.
Muchidimbu, Docker inopa zvinotevera features kiyi:
Kusurukirwa kubva kunharaunda.
Nzvimbo / Kushamwaridzana.
Asi yakanga isina mahara emamwe matambudziko, senge pakagadzwa midziyo iyi, kutaurirana. Ichi chaive chimwe chezvikonzero zvakatungamira mukugadzirwa kweKubernetes ...
Sezvo ini ndichataura pane gare gare Docker swarm, Ndinoda kutaura kuti iyi software yakagadzirwa nevakagadziri veDocker imwechete kuti vakwanise kuronga nhevedzano yeDocker inomiririra musumbu uye nekudaro ichengetedze masumbu, pamwe nekuronga midziyo.
Zvizhinji nezve Docker
Chii chinonzi Kubernetes?
Yakave yakagadzirwa neGoogle, uye yakazopihwa kuCloud Native Computing Foundation. Kubernetes Iyo zvakare Docker-senge sisitimu, yakavhurwa sosi, ine rezinesi pasi peApache, uye yakanyorwa uchishandisa iyo Go programming mutauro. Iyo inoshandiswa kugadzirisa iyo kuendesa uye manejimendi emidziyo yekushandisa. Uye zvakare, inotsigira nharaunda dzakasiyana dzekumhanyisa midziyo, kusanganisira Docker.
Pakupedzisira, Kubernetes iri orchestration rig mudziyo une basa rekubatsira akasiyana emidziyo yemuchina wakasiyana, manejimendi avo, uye kugovera nhumbi pakati pavo. Iri kunyanya iro sangano raita kuti chirongwa ichi chive chikamu chakakosha mumhando idzi dzezviitiko ...
Zvoga rollout uye deployments.
Mutoro kuenzanisa uye yakatwasuka chiyero.
Yakakwira kuwanda kwekushandisa zviwanikwa.
Mabasa anotungamirwa kunzvimbo dzebhizinesi.
Centralized application manejimendi.
Kuzvidzivirira pachako zvivakwa.
Zvizhinji nezve Kubernetes
Sezvauri kuona mune dudziro, ese ari maviri akafanana munzira dzakawanda, asi iwe une misiyano yavo, pamwe nekuve nezvakanakira nekuipira kwavo sezvose. Iwe unogona kufunga kuti kuziva izvi ruzivo iwe unenge uine zvese kuziva kuti ndeipi yaunofanira kusarudza, zvinoenderana nechinangwa chauinacho.
Zvisinei, dambudziko chimwe chinhu chakaomarara kupfuura icho. Izvo hazvisi zveDocker vs Kuernetes, nekuti zvingave sekuenzanisa zvinhu zvakasiyana kwazvo uye iwe unowira mukukanganisa kwekufunga kuti unofanirwa kusarudza pakati peimwe neicho. Mhedzisiro yeDocker vs Kubernetes haina musoro, asi unofanirwa kusungira matekinoroji maviri pamwe chete kuti ugone kuendesa uye kuyera zvishandiso zvine nzira iri nani.
Iyo yakakodzera kwazvo ichave kuenzanisa Docker Swarm neKubernetes. Izvo zvingave zvinobudirira, nekuti Docker Swarm ndeye Docker orchestration tekinoroji yekugadzira masumbu emidziyo. Kunyangwe, kunyangwe ipapo zvaisazobudirira zvachose ... Muchokwadi, Kubernetes yakagadzirirwa kumhanyisa musumbu, ichikwanisa kuratidzira masumbu enzvimbo pachiyero mukugadzirwa zvinobudirira, nepo Docker ichizviita nenzira imwechete.
Docker vs Kubernetes misiyano
Kuchengetedza izvo zvakasiyana, kana iwe uchida kuziva zvakasiyana pakati peDocker Swarm neKubernetes, vangave vari:
Kubernetes inosanganisira sarudzo dzakawanda dze personalization kushayikwa muDocker Swarm.
Docker Swarm iri zvakareruka kugadzirisa nekuda kwekureruka kwayo. Uye zvakare, zvakare zvakareruka kubatanidza mune iyo Docker ecosystem.
Pane kudaro, iyo Mhosva shiviriro Kubernetes yakakwira, iyo inogona kuve yakanyanya kunaka munzvimbo dzakadai sevhavha dzinowanikwa zvakanyanya.
Docker Swarm iri nekukurumidza maererano nekutumirwa uye kuwedzerwa kwemidziyo.
Kubernetes yechikamu chayo inopa hukuru hunovimbisa kune masumbu anoti.
El mutoro kuenzanisa muKubernetes inobvumidza chiyero chiri nani, kunyange hazvo chisingangoitiki seDocker.
Kubernetes inopa nani kuchinjikakunyangwe mukushandisa kwakaomarara.
Docker Swarm yaizotsigira kusvika 2000 mapfundo, zvichienzaniswa zviuru zvishanu paKubernetes.
Kubernetes ari yakagadziriswa kwemasumbu mazhinji madiki, nepo maDockers ari echikwata chikuru.
Kubernetes ari zvakaoma, Zvakareruka Docker.
Kubernetes inogona kubvumira share nzvimbo dzekuchengetedza pakati pechero mudziyo, nepo Docker iri shoma uye inongogovaniswa pakati pemidziyo mune imwechete pod.
Docker Swarm inobvumidza kushandisa chechitatu bato software yekutema matanda uye kuongorora, Kubernetes inosanganisira ayo akavakirwa-mukati maturusi.
Docker Swarm inogumira kune 95.000 midziyo, nepo Kubernetes inogona kutsigira inosvika mazana matatu ezviuru.
Ipo Docker iine nharaunda huru Kubernetes inotsigirwawo nemakambani akaita seMicrosoft, Amazon, Google, uye IBM.
Docker inoshandiswa na makambani seSpotify, Pinterest, eBay, Twitter, nezvimwe. Ipo Kubernetes ichisarudza 9GAG, Intuit, Buffer, Evernote, nezvimwe.
Wanga waona zvimwe zvakasiyana, ikozvino yave nguva ye zvakanakira imwe neimwe:
Kurongeka kuri nyore kwebasa nemapods.
Yakagadzirwa neGoogle, iine ruzivo rwakakura muindasitiri yegore.
Nharaunda hombe uye maturusi ekushandisa.
Mhando dzakasiyana dzekuchengetera sarudzo, kusanganisira maSAN emuno uye neruzhinji makore.
Inoshanda uye yakapusa setup yekutanga.
Mateki emidziyo yemidziyo kuti aongorore mutsauko.
Zvinyorwa zvakanaka kwazvo.
Kuzviparadzanisa kwakanaka pakati pemapurogiramu.
Kana zvakadaro izvo zvakashata:
Zvimwe zvakaoma kutama.
Kumisikidza kuisirwa uye kugadzirisa maitiro.
Hazvienderani nezviripo Docker maturusi.
Kuteedzera bhuku remanyorero kwakaoma.
Izvo hazvipe yekuchengetedza sarudzo.
Hapana otomatiki reprogramming yemabasa asingaite.
Zviito zvinofanirwa kuitwa muCLI.
Chinyorwa manejimendi yezviitiko zvakawanda.
Unoda rutsigiro rwezvimwe zvishandiso.
Zvakaoma bhuku remasumbu kutumirwa.
Hapana rutsigiro rwehutano-cheki.
Docker ikambani inoita purofiti uye zvimwe zvezvinhu zvayo zvakakosha, senge iyo Docker Injini uye Docker Desktop, haisi yakavhurika sosi.
Docker vs Kubernetes: Mhedziso
Sezvaunogona kufungidzira, hazvisi nyore kusarudza pakati peimwe kana imwe. Iyo Docker vs Kubernetes kurwa kwakaomarara kupfuura zvainogona kuratidzika. Uye zvese zvinoenderana nechinangwa chauinacho. Imwe kana imwe ichaenderana zvirinani, uye ndizvo zvinofanirwa kunge zviri sarudzo yako.
Mune zvimwe zviitiko zvakawanda, kushandisa Kubernetes neDocker ndiko kuchave kwakanyanya yesarudzo dzese. Mapurojekiti ese ari maviri anoshanda pamwe chete. Izvi zvinogona kugadzirisa kuchengetedzwa kwezvivakwa uye kuwanika kwakanyanya kwemaapplication. Unogona kuita kuti maapps awedzere kutyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » Docker vs Kubernetes: zvakanakira nekuipira
Kutenda kwazvo ! Izvo zvava kujekesana kwandiri, uye pamusoro pezvose kuti unzwisise kuti sekuwanda kwezviitiko, hapana zvirinani kana zvakaipa, kana isiri nyaya yekusarudza yakakodzera kwazvo.
Pamwe ini ndinongoda muenzaniso wakajeka kuti ndinzwisise mune mamiriro ezvinhu imwe kana imwe inoshanda zvirinani, uye mune iyo nyaya yekuishandisa pamwe chete.
Zvakare, ndedzipi dzimwe nzira dzatinadzo parudzi urwu rwe software?
Uye ndezvipi zvinoshandiswa izvo isu isu vatanga kuziva nezve makontena tigozvipa, kuti tione chaiwo makesi pasina kumirira kushanda mumakambani makuru?
Erikson Melgarejo akadaro
Ini ndinofunga chimwe chinhu chakatsanangurwa zvisirizvo pano, docker imanaja maneja, haigone kuenzaniswa neOrchestrator.
Kufananidza kwacho kungave pakati peDocker Swarm vs Kubernetes.
Sezviri pachena panguva yekugadzirwa kweiyi yakanaka kwazvo posvo (inonakidza kwazvo mumaonero angu), mamwe mazwi akayambuka.
Pindura Erikson Melgarejo
WhatsApp inotsanangura zvichaitika kana vakasatambira mazwi matsva ebasa